Ogaden News Agency (ONA) – Ma dhabba inay Itobiya been ka gaddo dawladda Shiinaha?
Ma dhabba inay Itobiya been ka gaddo dawladda Shiinaha?
Itobiya waxay xoogga saartey intii ka dambaysay dagaalkii Cobolle inay caalamka ka gado Laba arimood .. waxaadna moodaa inay u suurtagashay inay ka qariso caalamka heerka uu gaarsiisan yahay awooda ay ciidan ahaan ku leedahay Itobiya gudaha Ogadenya.
Hawlgalkii Cobolle ka dib waxay Itobiya ku dhwaaqday inay qaadayso olole ay muddo kooban uga sifayn doonto dagaalyahanka ONLF dalka Ogadenya. Ciidan xoogan oo dacaayad laga hormariyay ayay soo dhoobtay. Dagaalna way qaaday ay ku waxyeelaysay dadweynaha shacabka ah, taasoo caalamka ay u tustay loona aqbalay ilaa heer inay ahayd arin ay keentay dagaalka xoogan ee meesha ka dhacay (Collateral damage), iyo inay ka sifayso dagaalyahanka goobahaa.
Waxaa kaloo ay shaacisay in ka dib markay wiiqday dagaalyahankii ONLF-na ay heshiis nabadeed lakala saxiixatay hadhaagii Itoxaadka iyo garab ONLF ah
Si labadaa ay uga gado caalamka, gaar ahaan kuwa doonaya inay boobaan khayraadka dalkeena, waxay Itobiya xoogga saartey inuusan saxafi caalami ah ka galin xadka Somaliya gudaha Ogadenya si aanu u soo taaban xaqiiqada dhabta ah, oon loo hubinin sheegashadada Itobiya ee ah inay ka ka sifaysay Ogadenya dagaalyahanka ONLF.
Waxaa xayiradaa garab socday kooxda Ibraahim dheere ee calooshood la ciyaarka ah ee doonaya inay qadiyaddii umadda ku iibsadaan – samafalo loo sharciyeeyo – oo la maalgaliyay si ay qurba-joogta ugu gadh-qaadaan Ogadenya oo caalamka u yidhaahdo Itobiya way ku guulaysatay inay soo afjarto qadiyadii Ogadenya.
Waxaa arimahaa kaloo garab socday shirkadaha kor u dhaafay 6-8da ee kolba ay Itobiya u sheegaysay saxaafadda inay ka iibisay shidaalka iyo gaaska Ogadenya inay la soo baxaan. Hadafka ka dambeeyana uu yahay in lagu jahawareeriyo shacabka, maadaama ay ogsoon tahay Itobiya in shirkadaha aanay ku dhiiran karin inay galaan Ogadenya oo mashaariic malaayiin ku kacaysa ka fuliyaan dalka.
Waxay hadda ugu dambayntii caalamka u sheegtay inay shirkad Shiina ah oo lagu magacaabo Petro Trans ka iibisay ceelashii Gaaska ee Jeexdin (Calub and Hilala gas fields).
Waxaa la yidhi durbaan ninkii xaday meel uu ku tumo ayaa laga doonayaa. Dalka Ogadenya shacabkii lahaa way joogaan, Itobiyana way ogtahay inaysan si nabadgalyo ah kula baxaynin shidaalka Ogadenya.
Jabhadda Wadaniga Xoreynta Ogadenya waxay si sharci ah caalamka ugu caddaysay in aanay ogolaanaynin shidaalka iyo khayraadka Ogadenya inay Itobiya la soo baxdo iyadoo qadiyadda shacabka Ogadenya aan xal waara oo caadil ah loo helin. Dawladda Shiinaha waa inay shirkadaheeda wargalisaa una sheektaa xaqiiqada dhabta ah oo aanay ku qamaarin dhiiga shacabkeeda.